अम्बिकाबहादुर क्षेत्री स्मृति जुडो हुने
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन २३
नेपाल जुडो संघको आयोजनामा आठौं अम्बिकाबहादुर क्षेत्री स्मृति खुला जुडो प्रतियोगिता साउन २८ गतेदेखि हुने भएको छ।
दुईदिने प्रतियोगितामा पुरुष÷महिलामा ८–८ गरी १६ तौलसमूहमा जम्मा १ सय ४० खेलाडीको सहभागिता रहने जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्यले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। यसै प्रतियोगिताबाट नयाँ राष्ट्रिय टिमको छनोट पनि गरिने छ।
पुरुषको ५५ केजीमुनि र महिलाको ४४ केजीमुनिको तौलसमूहबाट भने राष्ट्रिय टिमका लागि खेलाडी छनोट नहुने बताइएको छ। त्यस्तै यहि प्रतियोगिताको पुरुष ९० केजीमुनि तौलसमूहमा पहिलो हुने खेलाडी अक्टोबर ५ तारिखमा ताजकिस्तानको दुसानबेमा हुने पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिताका लागि छनोट हुनेछन्।
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ। त्यसमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ स्व. क्षेत्रका परिवारले प्रायोजन गर्ने छन्। पत्रकार सम्मेलनमै स्व. क्षेत्रका छोरा प्रमोदबहादुरले सो रकम बराबरको चेक जुडो संघका कोषाध्यक्ष विपिनप्रसाद श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे।
सुरुको संस्करणदेखि नै स्व. क्षेत्रीका परिवारले प्रतियोगितालाई प्रायोजन गर्दै आएका छन्। प्रतियोगिताअघि साउन २७ मा रेफ्री तथा कोचिङ सेमिनार हुनेछ। सेमिनार र प्रतियोगिता दुवै सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा हुनेछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७४, १२:२९:३९